भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी –3- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी – 3
भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी – 3
काठमाण्डौं फर्केपछी – 3
त्यसपछी रुबीनाले मेरो लाँडोलाई आमाको बुब्समा दलिदिन थाली र भनी “आमाको बुब्सको बिचमा दादाको मोटो र लामो लाँडो ठ्याक्क फिट हुन्छ जस्तो छ… आफ्नो त बुब्स भन्नै नसुहाउने छ स्यानो हातमा लिंदा मुठ्ठीमै हराउला जस्तो…” अनि आफ्नो बुब्स पनि समाएर हल्कासँग मसली । रुबीना स्वाट्टै आमाको पछाडीपट्टी गई अनि मेरो लाँडो समातेर आमाको दुवै बुब्सको बिचमा राखेर भनी “दादा ! आमाको बुब्सको बिचमा चिकेजस्तो गर्नुस् त ?” मैले हल्का-हल्का लाँडोलाई कमरलाई तलमाथी गर्न थालें, रुबीनाले मेरो लाँडो माथी आमाको गर्धननेरबाट मुखभरी थुक जम्मा गर्दै खसालेर लाँडोलाई सजिलै घर्षण हुनका लागि सहयोग गर्न थाली । केहिबेर आमाको बुब्सको बिचमा चिकेपछी रुबीनाले आमाको मुखबाट मेरो लाँडो निकालेर आमाको नाकदेखि माथी सिउँदोनेर सम्म लाँडोलाई सुताई त्यसो गर्दा मेरो लाँडोको फेद अर्थात् गेडा ठ्याक्कै आमाको मुखमा पर्*यो र रुबीनाले आमालाई भनी “आमा ! हजुर दादाको गेडा मालिस गर्नुस् म लाँडो चुसिदिन्छु ।“
आमा केहि नबोलीकन मेरो लाँडोको फेदलाई चाट्न थाल्नुभयो भने रुबीनाले मेरो लाँडोको टुप्पोलाई आईसक्रिम झैं चाट्दै गर्न थाली । मैले यसो भित्तातिर हेरें, झण्डै साढे एघार बज्न थालिसकेको थियो, मैले रुबीनालाई भनें “ओई रुबीना रण्डी बुबा आउने बेला भयो, आजलाई यत्ति गरौं । आज बुबा र म भएर आमालाई चिक्ने मेसो मिलाउनु पर्*यो, तँ बरु घरबाट बाहिर निस्केको जस्तो गर । अनि भरे-भोलि तँ समेतलाई यहीँ चिकौंला !” “ह्या दादा पनि !! बुबालाई त आमाको चाकमा पो चिक्न मन लागेको ? अहिले खाना खाएपछी आमाले बुबालाई माथी लगेर चाकमा चिक्न दिनुहुन्छ… बरु तेतिबेला हजुर र म यहीं रमाईलो गरौं न मेरो कोठामा ! बरु बेलुका बुबालाई यहीं दारु अफर गरेर ब्लु-फिल्म हेर्दै चारैजना मिलेर रमाईलो गरौंला नि ! कहाँ बाहिर जानु यतिखेर… फेरी कपडा चेञ्ज गर्नुपनि पर्*यो ?” कुरा त रुबीनाको पनि ठिकै थियो, मैले भनें “ल डन् ! बरु तैले कपडा त अर्को लगाउनै पर्छ नि ?”
“ठिकै छ नि ! म पनि आमाले झैं प्लङ्ग नै लगाएर बस्छु बरु !” आमा किचनमा जानुभयो, रुबीना आफ्नो कोठामा गएर प्लङ्ग लगाएर आई, त्यसपछी रुबीना र म (कट्टुमै) टि.भी. हेर्न थाल्यौं । बुबा आएर रुबीना र म भएठाउँमै बस्नुभयो, मैले बुबाको कानमा खुसुक्क गरें “के छ बुबा ! खाना खाएपछी माथी गएर आमाको गाँड मार्ने होला नि त ?” बुबाले “अब त केहि नभनी दिन्छे होली नि तेरो आमाले ?” “हिजोसम्म त विकेश र मैले चिकेकै हो क्यार ? अब हजुरलाई मात्रै नदिए त मैले के गरुँ ?” “के भन्छ यो ? विकेशले पनि चान्स मार्*यो ?” “अब मैले उसको आमालाई चिकेपछी मैले उसलाई पनि त आफ्नो आमा दिनुपरेन र ?” “ठिकै छ केहि बिग्रेको छैन…?” “के छ बिचार बेलुका फ्यामिली सेक्स पार्टी मनाउने हो त ?” “कसरी ?”
“हजुर अलिअलि दारु बोकेर आउनु अनि हल्का पिएजस्तो गरौं त्यसपछी आमालाई र रुबीनालाई पालैपालो हजुर र मैले डबल डबल हानौं हुन्न ?” “त्यसो भयो भने त झनै मजा हुन्छ ?” रुबीना छेउमा बसेर मुस्काई मात्र रहेकी थिई, मैले रुबीनाको पोका समाउँदै भनें “यो माललाई त हामी दुईजनाले डबल हानेकै हो नि ? अब आमालाई मिसाउने त हो ? म माहौलको सुरु गर्छु नि ?” बुबाले सोध्नुभयो “हुन्छ छोरी ?” रुबीनाले प्लङ्गबाट पोका निकालेर बुबालाई देखाउँदै भनी “अहिले नै रमाईलो गरौं भनेपनि रेडी छु म त ?”
chikeko katha, chikeko katha nepali, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, naango boobs, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali real chikeko katha, nepali sex story, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, sexy chikeko katha, Stories chak chikeko katha
भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी – 2
पुती बाट पानी बग्ने गरी ल्वाम ल्वाम चिकेको